Ngatifarirei kutaura nyaya dzesviro ko asingade pakati ndiani, kwete zvenyu zvekusweronyepedzera kuita ma Saints!! PAMBERI NE KWIRO
Hama dzangu chitaurirwa hunyimwa mbare ye gotsi, zvemusi uyu zvaikunda ngoma kurira.
Musi uyu ndainge ndisina kuenda kubasa nekuti ndanga ndakumbirwa namukoma vari kuNamibia kuti ndiyendesere mwana wavo mari nezvimwe zvekushandisa ku boarding school kwaaidzidza.
Saka ndakatomuka zvangu kuma 9 semunhu anga asiri kuenda kubasa. Ndapedza kugeza ndakangoti rega ndimhanye pa mashops kunotsvaga tumazanda nekachingwa kuti ndiite ka breakfast ke chopaz chopaz ke boyz imwe iyaiya.
Pandakati ndichingobuda paghedhi, dhuma, dhuma na Marian. Marian aigara about 4 or 5 houses kubva pandaigara,saka ndaiwanzomuona makuseni ndichienda kubasa pa ma kombi. Or dzimwe nguva pandainge ndine mota yekubasa ndaimupa lift kupinda mu town. Ndipo chete paiperera nyaya naMarian.
Saka musi uyu ndakatomubvunza kuti seyi ainge asina kuenda kubasa, akandiudza kuti akanga ari pa off kwe mazuva matatu, apa aitoenda hake pamashops kunotsvaga airtime.
Takafamba hedu tese, apa ndanga ndisina kana nyaya naye, saka ndakapedzisira ndaakumuudza kuti inini wacho ndanga ndisiri kuenda kubasa coz paive ne some family issue I needed to sort out. Iye akangoti, iri bho but akaramba achibvunzisisa kuti aimbova ma "family issues" emhando whayi aitoda kuti munhu arege kuenda kubasa. Ndakazomuudza detail rekuendesera mwana mari ne ma groceries, ku Chishawasha ( St Ignatious).
Zvinoita mashura, Marian akati kana ndisingaite mind aigona kundiperekedza, because aiti haana kana plan plus kuti aswere kumba aiti haana kuzvijaira. Akanditi dai pasina programme ye mwana aida kundiendesa ku drink. Ndakamubvunza kuti aiziva seyi kuti ndinonwa mhamba. Iye akatondiudza zvake kuti aiva ne mafayera angu jawhi nguva chete ndoyaaindishaira zvekuti akatonditi musi uyu ndaitozomutsanangurira mushe mushe kuti ndiri munhu akaita seyi.
Pekutanga ndakafunga kuti aida zvekutamba neni, asi ndakatozoona kuti anga atoita zviya zvinonzi adenha mangwiro otokunya, nekuti akatoti aizondimirira in about 30 minutes. Ndichibudawo paghedhi ndakatoona, eh eh inga mai yacho ine chivindi
chiri serious yanga yatomira paghedhi apa yakapfeka jean ranga rakati mbambamba ne zviboda zvese izvi, plus ka blouse kaanga akapfeka waitoona bra yaanga akapfeka kuzoti iwo mazamu acho, akomanaka zvimwe ngatingoonayi chete. Mafuta ne perfume yaanga azora zvaiburitsa kamwe kakunhuwirira kasina mukare akaona.
Akomana zvimwe zvinhu ngationeyi shuwa, Marian anga ari musikana wekuti kumuapproacher waitoda maguts ari serious, because anga akanaka zviya zvekuti hapana chaunoshora, plus basa rake raiva rimwe riya rekuti kuti azonyatsozvi packager mushe mushe yanga isiri problem. Mazuva ekutanga ndaingomuti sister imwe iya iya kuti ndisapindwa ne mweya wekumunyenga, but deep down ndaingoti pamwe mukana uchauya. Zvino wakachizouya mukana musvinu, pachivanhu chedu vanoti, chaza nerima hutenda auya nacho.
Takabatirana ka medium size mornach tichienda kumakombi, apa taingotaura general nyaya, dzakaita sedzepeturu iri kunetsa, mari shoma iri kutambiriswa vaseenzi, plus nyaya dzevanhu vari diaspora, nezvimwewo. Takaona Mwana zvakanaka palunch ndikamusiira goods ne mbongo yanga yabva kuna blaz ndakazomupawo ka 5 thaza, kekujuta pane gero kuti rione kunge ndiri dikez ine care.
But yakatambika ndeyekuti pandakaona kuti Marian ari kuda kuuyawo neni ndakafano bvisa 5 thaza pamari ye mupfanha, ndikaiisa paside kuti iite kunge yabva kwandiri. Mupfanha ndakamupa breakdown yetransaction yacho and akaibata fast-Semuchinda ndakatozoona kuti anetenge tsotsi worse mufana wacho because, kukasika kwaakaita kukabira hakuna kundigutsa. Ndakangoti akatora ruoko rwa bamdiki haiwa hameno nekuti bamdiki yacho yanga iri saskum order hombe chaiyo.
Pakudzoka manje musikana akashingirira nyaya yekuti aida kunditengera drink. Inini ndingati zvaizoita nyore kudayi taigona kuno dhaira kudhen iye akatoti anga asina dambudziko nazvo. Pese paiitika izvi vashe vangu mubhurugwa vanga vanzwa nekumira
nekurara nekumira nekurara, kusvikira vatombozvisvipira svipira. Akatenga 8 macan e Zambezi ne 4 Mabohlingers. Kuti ndichimubvunza kuti ko aiziva seyi kuti ndinorova Zambezi, ndakangoti ehh, charakupa denga tenda, ukabvunza zvakawanda murungu angasvibe moyo. Ndakazojutirawo kutenga ka pork kuti tonobhaizira kugagocha tichinwa hedu.
Apa manje ndanga ndaane nyota heavy, I think guys know the feeling-like kana uchiita charm musikana usually people react differently – some sweat, some vanobuda masiriri kunga imbwa iri kunetsana ne bhonzo, vamwe ndovanochinja step, vamwe vanosura-ehe- kusura chaiko, asi ini manje ndinopera mate mukanwa. Ndozvakaitika apa.
Takasvika muroom yangu, it was a very big one but yanga yakapartitionwer on one side ne wardrobe then the other side ne kitchen unit. Saka waiti uchipinda it was a makeshift kitchen, then ka lounge ke bhayiz, then kuseri kwaiva ne "bedroom". For a bachelor it was 5 star, and patakapinda I could see kuti musikana haasi kunyanyoshora hake zvaaiona.
Manje zvinhu zvese zvaiva ku "bedroom" side, Radio, TV, DVD ne VCR
Saka was struggling to take these things to the lounge side, but Marian akanditi ko ndaizvinetsereyi, since taikwanisa kungoonera kana kunzwa music kubedroom side. Iniwo ipapo ndakangoti iya mai ava vari raiti raiti shuwa shuwa here.
Anyway takanwa hedu gas, I did not know kuti she could talk and laugh like that, ende apa aiti akasekerera so mwana aibva anyanyonaka zvekuti ndaitotyira kuti akazoramba achiseka so aitozopedzisira anyangara because anga akanaka kusvika pekupedzisira. Saka kuzoramba achinakiswa nekuseka aitozonyangara chete.
Anyway, takaona hedu 1 movie, she was almost done with her fourth beer and I excused myself kuti ndicheke kanguruve kandaaa ndaisa muoven. She offered to come and assist.
Ndakamira pastove ndakaona munhu auya nechekumashure, akandimbundira ndakatarisa kumberi akaisa maoko ake just on my belly and I twitched slightly coz maoko ake akaita kunge aino dzika nechekuzasi kwebande.
Chakandivhundutsa ndechekuti ndaitya kuti zvimwe akaguma vashe vaye nekumira kwavanga vakaita pamwe aitozorowha ne buka because kumira kwakadaro kana vanwa overdose yevhukavhuka haiisvike ipapo. Ndakangoita kanervous chuckle then proceeded to check the oven, yanga yatoibvawo zvayo.
Marian akatora mahanyanisi nematimati, nemagaka andaiva ndaisa muplate pamusoro pefiriji kwaakua slicer slicer iwe. Then we went back kubedroom side. Tanga taakungo player music chete manje.
Mumwe mweya wakamboti chirega ndingotaura zvechirango kuti ndipihwe zvinhu formally, but ndakatozoona kuti uku kunenge kwaakuda kuraura hove iri muaquarium, apa muri mumba futi. Ndakajuta kumudyisa tu matimati ne magaka, ndikaona mwana achiita kusvisvina tugaka tuya zviya zviri enticising apa aiti when I get my fingers on her lips she would suck them.
Takapedza kapork kaya ndikabuda kuenda ku toilet, Apa ndaida kunobonyora kuti ndidzoke uturu hwa ushoma but ndakatora ma ice block mu firiji asingaone ndobva ndabuda. Hapana chakashanda akatonyungudika ese ndikatoona yatomira worse. Ndakati regai ndidzokere tinoona zvazvinenge zvaita. Apa ndaitya nyaya yekukasika kutunda.
Ndakasvikorara pamakumbo aMarian, musikana akatanga kundipuruzira ne chepa chest apa achivhura ma button eshirt yangu. Apa ruoko rwangu rwakanga ruchingobhaizira kukwenyezera musana ndakaisa ruoko mukati meblouse. Ndaka kochonora kawaya kanobata bra nechekumusana, ndikanzwa dairibord yamai ichisununguka, asi kwete zvekuzoti gojono. Mwana aiva nezamu kuita kunge maorange mahombe so rakanyatsotenderera ende kanyatso kacho kaiita kunge kakagadzirwa pako kega kubva kazonamirwa after zvimwe zvese.
Akaramba ongondipuruzira chest nedumbu apa shirt was off now, akanetseka kukochonora bhande, asi paakati wetsu zip akaona vashe vaya zvinhu vachitutuma tutuma vari muandaweya , vachibuda tumasiriri kumberi. I had to change my pant because of ice blocks, saka kakutoterera ketumvura tunobuda before huronyo ndiko kanga kakaita pamberi pe nduwe yangu.
Paakati zip wee ndakatombomira zvandaita kumusana kwake kuti ndinyatsoteerera kuti zvaienda nekupi. Akandikanda pamubhedha apa Trouser richiri half mast, ndokubva aribvisa, ndakapiwha imwe deep deep kiss yandisati ndamboona, akadzika nemi hama dzangu akandiyamwa tu mazamu twangu ende iyo mboro ine manyemwe, aiti akandiruma tunyatso twangu so yobva yati vhi vhi, akasiya izvozvo kwaakudzika ne chepadumbu ari ma kiss kupera, haiwa akazoti trouser nepant yacho kawhani svaku, ndokubva vashe vaye vatorwa kwaakunzi vese mukanwa mvoooo, ipapo ndakange zvino ndaa kungobwaira bwaira kunge kamwana kabatikidzwa kachiba shuga.
Munhu anoyamwa mboro iyeye, yakasvetwa ikananzvwa, ikaitwa kunge chiiko handichaziva. Akazoikwiza, akaibonyora kusvika ndatunda.
Ndakazoti munhu haadi kujaidzwa, pese apa aiva achiri akapfeka ndini chete ndaiva ndasara ndiri musvo. Ndakamubvisa ka top kaye pamwe nebra randaa ndakochonora tuwaya paya, We stood up ndobva ndavhura zip yejean rake mbijana mbijana, kwaakubvisa jean pamwe ne kaG String, apa mahips acho baba nekuzoti zviboda zvacho pazvinouya ne chekumberi uku, kuzoti Burkina Fasso, akomana mwana anga akavakwa zvimwe ndezvimwe.
Ndakamutakura ndokumuradza pamubhedha apa aingoti uhhh ohhhh uhhh arrggggghhhh, ndakamuradzika akatarira mudenga ndikati chaa kwenyu amai, zviya zvekunzi, haa hanzi beche kasmero kuita seyi, ndakananzva beche sebeche, apa anga achiti nyakata kudhara, ndaiita zvekutopinza rurimi mukatikati chaimo, ipapo ndipo payi wayinira kupfuura zvisikana zvinotamba pamaVideo a Sean Paul. Ndakayamwa gambi ndigoyamwa apa maoko ari busy kupurizira mazamu.
Ndakazonzwa aakuti " shaaaaa, do it now, please, please". Ndikati unonyeba haikona ndiwe wandiyamba, ndakambo mufinger kwe a minute or so ndokubva ati ndimbomupa ne Burkina Fasso. Mwana akafongora munoziva gambi kuuya kumusoro kuita kunge paya pane Ka LNB kesatellite dish. Ini ndikati ndouya amai, kunoiti pfe mwana akadzvova kunge mombe yadzipwa ne joki, ndikafunga kuti ndacommita murder pano. Ndakazonzwa, futi oti "Eish dear you are so hard". Ndikati hoo uchataaura chirungu chese nhasi, naro gambi, apa nekutunda kwandanga ndamboita I knew kuti ndinombo chovha chete.
Ndakamborova neshure kwe about 6 or so minutes, ndokubva auya pamusoro, akomanaka, mwana akandikoyira zvekukoyira zviya ndikanzwa achinja speed yaaikoira nayo aaakunyatso ndidzvanya manje, apa ndaipuruzira mazamu nekumubatsira kusumudzira ndakabata magaro ake.
Ndakaona zvino obhenda achikotamira towards kwandiri and she gave me imwe kiss se iya iya ndikaona eh he mai vaa kugwinha gwinha kunge munhu adirwa mura yabva mufiriji. Ndokuzoona aizve maziso apinduka pinduka, munhu kwaakuti fototo akadaro.
Ini manje yangu yanga ichingori banga chete, ndakati rega timupe time aite recover. Zvakatora nguva here in about 30 minutes ndiye anga atanga futi kutamba nayo. Ndakada kuti ndikwire pamusoro pake akati ndimbomira
maybe anga asati anyatsosvika futi pari bho. Ndakambomu massager akarara nedumbu ndokuzomusandura ndaakutamba hangu ne kabinzi ndikaona achivhura makumbo mbijana mbijana ega. Ndopandakaenda pa musoro.
Ndakambotamba hangu ndichimukissa ne nekuyamwa mazamu apa mboro
ichingotsvanzvadzira pamukova webeche, pandaigumisa aiti svvvv, svvvvvv, svvvvv arrrrghhhhh, svvvv, arrrrghhhh. Ndakazoiti bvo zvekare ndokukoira slowly ndichiburitsa almost yese ndoindonyera futi kusvikira andibata musana.
Apa ndanga ndaakungoikurungira iri mukati, iye chikapa chacho-Hameno kuti munhu anodzidzisa vanhu ava anombowanikwa kupi. Iwe unonakirwa shamaz uchipepetwa uri some few centimeters from the surface ye Bed. Mwana anokurunga iyeye. Ndakakurungwa ndikapepetwa ndikamborowha side to side, apa irimo chete. Ndanga ndamboedza zvangu kuzviholder but apa ndakatenda. Ndakambomira inini kukoira kuti ndimboona kuti ndinga
prolonge here the activity. But akandikoira wanzwa, agondikoira, agondikoira, ndakamira kudaro ndakanzwa huronyo whangu whaa kunyatsorongana kuti 1, 2, 3 get ready.
Apa ndakachizomubata magara iwayo aingunotenderera ndokubva ndamumudhonzera kwandiri zvine chisimba apaanga andibata gotsi manje, Ndakamukissa a deep long one ipapo huronyo whanga whaakubuda so ndakanzwa ndega mu pelvis area yapinda mu involuntary motion ndaakukoira zvisingadzoreke , ndikanyatsonzwa kuti yahh iye zvino ndaa kuchizonyatsotunda manje. Ndakadzvovawo zvangu but it was quite involuntary asi ndakanyatsonzwa kuti yes, uku ndokusvirana zve uku. Iyewo akauya just before I ejaculated. Ndakanzwawo ongotura befu ari wega.
Takamborara zvedu takadaro for some time, hour inogona kusvika.
Takazotanga kutaura nyaya zvedu time time, even kuti ndichitaura kuti ndaimunzwira shuga ndakatoona kuti hazvichina basa nekuti shuga yacho tanga tatoi sampler.
I realized much later kkuti makondomu aiva mu wardrobe but hapana kana akambofunga zveprotection.
Apa dzanga dzatoo kuma 8, Ndakangomusiya paghedi ndobva ndadzoka
Mangwana acho, handina kuenda kubasa.
Posted by ~Ndai~ at 7:00 AM
Jaime Sy October 17, 2017 at 8:40 AM
Sister Part 3
Have u ever...?
Hama dzangu chitaurirwa hunyimwa mbare ye gotsi, z...
Shamwari yemurume kunaka!!
Am here to let out all my sexual frustrations and to help anyone else with sex related problems